आमालाइ बxचाउन गए तर आफू फxर्केनन ! – Taja Khawar
आमालाइ बxचाउन गए तर आफू फxर्केनन !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८ समय: १६:२२:४८
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा एक महिला चापाकलमा नुहाउन लागेकी थिइन् । तराईमा चापाकलमा मोटर जोडेर पानी तान्ने चलन हुन्छ । सोही चापाकलमा लगाएको मोटरवाट लिक भएको क’रेन्ट महिलालाई लाग्यो । महिलाका छोरा २० वर्षका अश्वनीकुमार झा आइपुगे ।
उनले आमालाई बचाउने क्रममा आफै ज्याxन गुमाए । कर्जन्हा नगरपालिका ६ का २० वर्षीय अश्वनीकुमार झा को करे’न्ट ला’गेर नि,ध,न भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ । चापाकलमा जडान भएको मोटरमा नुहाउने क्रममा झाकी आमालाई करेन्ट लागेको थियो । आमालाई बचाउने प्रयास गर्दा अश्वनीकुमारको क’रे’न्ट ला’गेर मृ,x त्यु भयो । क,रे,न्ट लागेर झाकी आमा भने गम्भीर घाइते भएकी छन्उ, प्रहरीले जानकारी दिँदै भने ।
आश्वीनी कुमारको आमाको उपचार कर्जन्हास्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा भइरहेको छ । आमालाई बचाउन पुगेका छोराकै मृ,x त्यु भएपछि स्थानीय शोकमा डुबेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरूमा चर्चा भएको छ । भारतका गलत व्यवहारबारे ओलीले पटकपटक आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रवादी छबी बनाएका ओलीले ‘नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतले धम्काएको’ बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ ।
Last Updated on: September 24th, 2021 at 4:22 pm